MMEMME MAKA IWE IHE EJI EBIPU - ỊHỌRỌ USORO IHE OMUME - 2019
Mmemme maka iwe ihe eji ebipu
Ịnwere ike iji aka gị dee akwụkwọ mpempe akwụkwọ, ma ọ na-ewe oge na nkà pụrụ iche. Ọ dị mfe ịme nke a site na iji mmemme ndị metụtara ya. Ha ga-enyere aka iji bulie map nkewa, na-atụ aro nhọrọ ndị ọzọ na-enye gị ohere igbanwe ya n'onwe gị. N'isiokwu a, anyị ahọrọla gị ọtụtụ ndị nnọchianya ndị na-arụ ezigbo ọrụ na ọrụ ha.
A cutting Cutting na-enye gị ohere ịrụ ọrụ na iwu site na mbubata ha blanks si katalọgụ. Na mbipụta ikpe nke ndebiri ahụ enwere ole na ole, ma ndepụta ha ga-abawanye mgbe ị nwetara ikikere mmemme. Onye ọrụ ahụ na-emepụta mpempe akwụkwọ na-agbakwụnye nkọwa maka ọrụ ahụ, mgbe nke a gasịrị, ngwanro na-emepụta map nke na-akpaghị aka. Ọ na-emepe na nchịkọta akụkọ, ebe ọ dị maka edezi.
Download Astra Open
Onye nnọchite na-esonụ dị iche na nke gara aga na ọ na-enye nanị usoro nke ọrụ na ngwaọrụ. Tụkwasị na nke a, ị nwere ike itinye naanị akụkụ ndị a kwadebere tupu ụfọdụ. Akara map ahụ ga-apụta nanị mgbe ị zụrụ nsụgharị nke Astra S-Nesting. Na mgbakwunye, enwere ụdị akụkọ dị iche iche na-emepụta na-akpaghị aka ma nwee ike bipụta ozugbo.
Plaz5 bụ ngwanrọ oge ochie nke onye mmepụta ahụ akwadobeghị, mana nke a anaghị egbochi ya ịrụ ọrụ ya n'ụzọ ruru eru. Ihe omume a dị mfe iji, ọ dịghị achọ ihe ọmụma ọ bụla ma ọ bụ nkà ọ bụla. Ejiri ngwa ngwa edepụta map, na ihe niile achọrọ n'aka onye ọrụ bụ ịkọwa mpaghara nke akụkụ ahụ, akwụkwọ, na imepụta map.
Nke ikpeazụ n'ime listi anyị ga-abụ òtù. A na-emejuputa usoro a n'ụdị tebụl dị iche iche, bụ ebe a na-abanye ozi ndị dị mkpa, mgbe ahụ, a na-emepụta kaadị kachasị mma. N'ime atụmatụ ndị ọzọ, enwere ike ịgbakwunye ọnụ. E kesara ORI maka ego, a na-enyekwa akwụkwọ ikpe maka nbudata na ebe nrụọrụ weebụ gọọmentị nke ndị mmepe.
Ihe mpempe akwụkwọ mpempe akwụkwọ bụ usoro mgbagwoju anya ma na-ewe oge, ma nke a bụ ma ọ bụrụ na ị gaghị eji ngwanrọ pụrụ iche. N'ihi mmemme ndị anyị tụlere n'isiokwu a, usoro nke ịmepụta mkpirikpi map adịghị ewe oge buru ibu, ọ dịkwa onye ọrụ mkpa iji gbalịsie ike.